यस्ता फलफुल जसमा किटनाशक बढी हुने खतरा हुन्छ, कसरी हटाउने किटनाशक ? जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
पौष्टिक आहारको मेनुमामा सबैभन्दा अगाडि फलफूल, सागसब्जीको नाम आउँछ । हरियो सागसब्जी र फलफुल विना पौष्टिक तत्वको आहार अधुरो मानिन्छ । तर, पोषणका लागि खाइने यस्ता खानेकुरा अहिले विषाक्त बन्दैछ । अतः फलफूलबाट हामी पोषण होइन, विष सेवन गरिरहेका छौं ।
खेतमा उब्जाउ हुने यस्ता सागसब्जीलाई किरा फट्यांग्राबाट जोगाउनको लागि बजारमा पाइने अनेकथरीका किटनाशक औषधीको प्रयोग हुने गर्दछ, तर यसरी किटनाशक औषधी प्रयोग गरेता पनि त्यसमा हामीले हाम्रो नाङ्गो आँखाले नदेखिने किटाणुहरू हुने गर्छ ।
यसमा पनि कैयौ यस्ता तरकारी तथा फलफुल छन जसलाई हामीले पखाले पनि त्यसको सतहमा नदेखिने किटाणुका अंशहरू तासिरहेको हुन्छ । जसको कारण हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्ने खतरा रहन्छ । अमेरिकाको एक गैर-सहकारी संगठन इन्वायर्नमेटल वर्किग ग्रुपले १२ थरीका फलफुलहरूलाई खराब फलफुलको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ जस्तै, पालक, स्याउ, नाशपाती, चेरी, अंगुर, गोलभेडा, हरियो खुर्सानी र आलु आदि ।
विभिन्न थरीका किटनाशक
अमेरीकाको कृषि विभागबाट प्राप्त भएको आँकडाका अनुसार, २०१५ मा ७०६ वटा स्ट्रबरीमा गरिएको अनुसन्धानमा ४० वटामा ७० प्रकारका किटनाशक भेटाएका थिए । त्यसैगरी युरोपियन फुड सेफ्टी अथोरेटीले आफ्नो ८४ हजार भन्दा पनि बढी खानाको परिक्षणमा ४३.९ प्रतिशत किटनाशकको अवशेष पाइएको थियो तर त्यसलाई खतारनाक सूचीमा सुचिकृत गरिएको थिएन ।
नो टाक्सिंग टू द लिविंगका निर्देशक कार्लाेस डिप्राडाका भनाई अनुसार उब्जाउ हुने फलफुल वा सागसब्जीहरू मध्ये कुनमा कति किटनाशक छ र त्यसलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न भने सम्भव नभएको बताउनु हुन्छ ।
किटनाशकको प्रयोग एकै थरीको हुँदैन
शोधकर्ताहरूको भनाई अनुसार विश्वमा खानाको खपत र किटनाशकको प्रयोग एकै थरीको हुँदैन । कुनै देशमा यसको प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाएको छ भने कुनै देशमा यसको प्रयोग अधिक मात्रामा हुने गर्दछ । अमेरीका र युरोप जस्ता देशहरूमा खाद्य पदार्थमा किटनाशकको प्रयोग कम मात्रामा प्रयोग गरिएको पाइन्छ तर यसलाई शोधकर्ताहरू खतरा भने मानिदैन ।
तर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका केही कार्यकर्ताहरू कम मात्रामा प्रयोग गरेता पनि अनेक थरीका किटनाशक औषधीहरुको एक साथ प्रयोग गर्दा त्यसबाट आउने कांकटेल असरको कारण निकै चिन्तित देखिन्छ । जुन निकै खतरनाक हुन्छ ।
यही सम्बन्धमा केही वैज्ञानिक शोधकर्ताका अनुसार एक साथ फरक फरक किटनाशक औषधीको प्रयोगको मिश्रणबाट प्रजनन क्षमतामा कमी ल्याएको हुन्छ साथै वीर्यको विकास र बच्चाको दिमागमा पनि प्रभावित पारेको हुन्छ । यस्ता किटनाशक औषधीको अधिक मात्रामा प्रयोग गर्नाले हाम्रो शरीरको हार्माेनमा पनि समस्या उत्पन्न गरेको हुन्छ ।
कसरी हटाउने किटनाशक ?
– डि प्राडाका अनुसार आर्गेनिक फलफुल तथा सागसब्जीको प्रयोग नै किटनाशकबाट बच्ने प्रभावशाली उपाय हो, तर यो महँगो र बजारमा सजिलै उपलब्ध हुँदैन ।
– फलफुल अथवा सागसब्जी सफा पानीमा ३/४ चोटी राम्ररी धुनाले पनि केहि फाइदा हुन्छ, तर यसबाट किटनाशक पूर्ण रुपमा सफा भने नहुन सक्छ ।
– फलफुल जस्तै नाशपाती, स्याउ तासेर खानाले पनि किटनाशकको खतरामा कमी आउँछ । अन्य फलफुल जस्तै अंगुर, स्ट्रवरी, चेरी मज्जाले पानीमा पखालेर मात्र खानुपर्छ ।
कस्तो हुनुपर्छ खानपान ?
Up Next तपाईको कपाल कतै खस्रो त छैन ? यदि छ भने यसरी सजिलै नरम बनाउन सक्नुहुन्छ
‘नानी रोएको छ, भोक लाग्यो होला, खुवाइहाल’ ‘नानीलाई छिटो दुध खुवाउनु’ शिशुका आमालाई घरपरिवारले यस्ता कुरा भनिरहन्छन्, सम्झाइरहन्छन्। अर्थात् धेरैको…
यसरी राखौं बच्चाको ख्याल जाडो मौसममा
हिँउद महिना सुरु भइसकेको छ । अब मौसमी तापमान क्रमस ओह्रालो लाग्नेछ । जाडोले बृद्धबृद्धा, रोगी र बालबालिकाको दिनचर्या असहज बनाइदिन्छ…